ग्लोवल आइएमईद्धारा २० प्रतिशत लाभांश पारित | गृहपृष्ठ
Home लगानी ग्लोवल आइएमईद्धारा २० प्रतिशत लाभांश पारित
ग्लोवल आइएमईद्धारा २० प्रतिशत लाभांश पारित
कात्तिक २३, काठमाडौं (अस) । बिहीवार सम्पन्न ग्लोवल आइएमई बैङ्क लिमिटेडको ११ औं वार्षिक साधारण सभाले २० प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । गत आवको नाफाको आधारमा बैङ्कले चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत वोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा बबरमहलको कार्की बैङक्वेटमा सम्पन्न सभामा बोल्दै सदस्यहरुले आगामी दिनहरुमा अझै प्रगति गर्दै जान सुझाब दिएका छन् । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई पालन गर्दै तोकिएको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुर्याएकोमा शेयरधनीहरुले धन्यवाद तथा बधाई समेत दिएका छन् । कार्यक्रममा सदस्यहरुको तर्फबाट १३ जनाले आफ्नो भनाई राखेको थिए ।
२०१३ मा पहिलोपटक कोरियादेखि रेमिट्यान्सको सुरुवात गरेको बैङ्कको हालसम्म १ सय ८ ओटा शाखा सहित १ सय २३ ओटा एटिएम रहेको र १ हजार ३ सय ८२ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको बताएका छन् । बैङ्कले आगामी दिनहरुमा शाखा विस्तार गर्ने र लन्डनमा आफ्नो प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य जारी रहेको सभाका अध्यक्षले बताएका छन् । यस बैङ्कले हालसम्म १० कम्पनीहरुलाई प्राप्ति गरेको छ । हाल रिलायबल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति लिन बाँकी रहेको समेत बताए ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैङ्कले रू. ३५ करोड ३२ लाख ३ हजार नाफा कमाएको छ । यो वर्ष सञ्चालन नाफा रू. ३८ करोड ९३ लाख ३० हजारमा सिमित भएकाले नाफा घट्न पुगेको हो । खराब कर्जा संकलन २४ प्रतिशतले कमी आउनु र सम्भावित जोखिमका लागि रू. १६ करोड ६६ लाख २५ हजार छुट्याएकाले सञ्चालन नाफा गत वर्षको तुलनामा कमी आएको हो । निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको ग्लोबलको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १७ दशमलव ४८ रहेको छ ।